Wararka Maanta: Axad, Jun 24, 2012-Falal ay ka mid yihiin Qarax, Afduub iyo dil Qorsheysan oo ka dhacay Deegaanno ka tirsan Gobolka Waqooyi-bari Kenya
Taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Kenya ee gobolka Waqooyi-bari, Philip Ndolo ayaa in labada sarkaal ee ka tirsan booliiska ay qabaan dhaawacyo halis ah, ayna miinadu la qaraxday mar ay lasoo laabteen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa.
"Saraakiisha waxay kasoo laabteen xuduudda, markii ay ku qaraxday miino lagu xiray geed dushiis," ayuu yiri Ndolo, isagoo sheegay in labada sarkaal la dhigay isbitaalka degmada Mandheera.
Weerarkan ayaa lagu eedeeyay Al-shabaab, iyadoo la sheegay inay ku dhaawacday 30-ruux qaraxyo noocan oo kale ah oo lagu xiray geedo, iyadoo booliiska Kenya ay qabqabteen 15-qof oo lagu eedeeyay inay qaraxan abaabuleen.
Kooxo hubeysan ayaa waxay habeenkii Jimcaha ka dhaceen deegaanka Libooyo oo ku dhow soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya gaari kuwa rakaabka ah, iyagoo ula baxsaday dhinaca Soomaaliya.
Rakaabkii gaariga la socday qaarkood ayaa laga soo xigtay in rag hubeysan ay ku joojiyeen gaariga meel ku dhow xadka ayna darawalkii iyo dadkii sarnaa ku amreen iyagoo markaas kaddib gaariga watay.
"Dhammaan falalka ka dhacaya gobolka waxaa geysanaya kooxo hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab, dadka deegaanku aad ayay u baqayaan waayo khatar ayay ugu jiraan wax walba, mana jirto cid ilaalinaysa ammaankooda," ayuu saxaafadda u sheegay darawalkii gaariga laga dagsaday oo argagaxsan.
Sidoo kale, kooxo hubeysan ayaa isla habeenkii Jimcaha ku dilay xerada Dhagaxley oo ka mid ah xeryaha Dhadhaab ku yaalla dukaanle Soomaali ah, kaddib markii lagu weeraray dukaankiisa.
"Ganacsadaha waxaa toogtay shan ruux oo qoryo fudud ku hubeysan xilli habeen ah, wayna baxsadeen, ma garanayno cid ay ahaayeen, maydkana dadka xerada ku nool ayaa qaaday," ayuu yiri guddoomiyah xerada Dhagaxley, C/fitaax Ismaaciil.
Dilkan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo hay'adaha samafalka ee caalamiga ah ay ka dayriyeen xaaladda ammaan ee xeryaha qoxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya oo ah xeryaha ugu weyn dunida, waxaana ku nool in ku dhow nus malyuun qof oo qoxooti Soomaaliyeed ah.